» ‘भारत र चीनमा बन्ने खोप नेपाललाई उपयुक्त’
२० मंसिर २०७७, शनिबार ०७:२८
विशेषज्ञहरूले कोभिड–१९ विरुद्घको खोप ल्याउन नेपालले उत्तर र दक्षिणका छिमेकी चीन र भारतसँग विशेष सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । चीन र भारतले प्रयोग गर्ने खोप नेपालका लागि समेत उपयुक्त हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘कोभिडविरुद्घको खोपका लागि सरकारले तुरुन्त चीन र भारतसँग सघन संवाद सुरु गर्नुपर्छ, हाल राज्यले खोपका लागि गरेको प्रयास अत्यन्त सुस्त देखिएको छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक एवं कोरोना खोप व्यवस्थापन समितिका सदस्य डा. जीडी ठाकुरले भने, ‘खोप उपलब्धताका लागि युरोप र अमेरिकाभन्दा बढी ध्यान चीन र भारततिर दिँदा त्यो दीर्घकालीन हुन्छ ।’
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र चीनलगायत अन्य खोप निर्माता मुलुकका सरकार प्रमुखसँग प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरेर खोपका लागि पहल बढाउने बताए । नेपालीको जिन, रहनसहन, खानपान, वातावरण, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य पूर्वाधार र संरचना आधारभूत अवस्था चीन र भारतसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले त्यहाँ उपयोग गरिने कोभिडविरुद्घको खोप युरोप–अमेरिकामा उपयोग हुनेको दाँजोमा नेपालका लागि उपयुक्त हुने डा. ठाकुरको दाबी छ ।
विज्ञहरूले ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) को व्यवस्थापनमा कोभाक्स सुविधाबाट सहुलित दरमा आउने भनिएको खोप सम्पूर्ण नेपालीका लागि अपुग हुने भएकाले खोप आपूर्तिको दिगो र विश्वसनीय साझेदारसँग संवाद र निर्भरताका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मुलुकलाई सहुलियत मूल्यमा प्राप्त हुने भनिएको कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत कोभिडविरुद्घको खोप हालसम्मको विकासक्रमअनुसार कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि मात्र दिइनेछ । त्यो पनि यो खोप एकै पटकमा नभई चरणबद्घ रूपमा दिइनेछ ।
कोभाक्सअन्तर्गत सुरुमा कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशतका लागि हुने कोभिडविरुद्घको खोप पाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोपसम्बन्धी आधिकारिक निकाय ‘बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा’ का प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले बताए । कोभ्याक्सअन्तर्गत पहिलो चरणको खोप भित्रिनेबित्तिकै सुरुमा जोखिम बढी भएकाहरू अर्थात् फ्रन्टलाइनर र बूढापाकाहरूलाई दिइने उनले जनाए । मुलुकको २० प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् करिब ६० लाख जनसंख्याबाहेकका लागि खोप सुनिश्चित गर्न अन्य मुलुकसँगै तत्काल भारत र चीनसँग विशेष संवाद सुरु गरिहाल्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
हाल अन्तिम चरणमा रहेको चीनका ४ र भारतका ३ खोपमा नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउँदै डा. ठाकुर भन्छन्, ‘भारत र चीनसँग खोपका लागि दोहोरो सघन संवाद सुरु गर्नुपर्छ । यो संवाद खोपको उपलब्धता, वितरण, तालिम आदिबारे सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ भारतको केही दिनयता छिमेकी पहिलो नीतिअनुसार नेपाल र बंगलादेशलाई खोप सहयोग गर्ने भने पनि कति मात्रा दिनेबारे स्पष्ट भएको छैन । गत साता नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले भारतमा खोप उपलब्ध हुनेबित्तिकै नेपाललाई सहयोग गर्ने नेपाली अधिकारीलाई बताएका थिए ।
अन्तिम चरणको परीक्षणमा १० खोप
गाभीको अनुसार हाल विश्वमा कोभिडविरुद्घ १५४ भन्दा बढी खोप प्रि–क्लिनिकल अर्थात् जनावर र प्रयोगशालासम्बन्धी प्रयोग भइरहेका छन् । यस्तै २१ वटा खोप पहिलो चरणको ट्रायल (परीक्षण) अन्तर्गत स्वस्थ युवा व्यक्तिमा परीक्षण भइरहेको छ । यसअन्तर्गत ९ वटा प्रोटिन आधारित, ८ वटा भाइरल भेक्टर, २ वटा न्युक्लिक एसिड र १ वटा भाइरस आधारित खोप छन् । १३ वटा खोपको दोस्रो चरणअन्तर्गत मानिसहरूको ठूलो समूहमा परीक्षण भइरहेको छ । यस्तै १० वटा खोपको कोभिडप्रतिको प्रभाव हेर्न अन्तिम अर्थात् तेस्रो चरणको बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणबाट गुज्रिरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रले खबर लेखेका छन् ।
विप्लव समूहले १० गते नेपाल बन्द गर्ने
सीमाको मुद्दा नेपालले उठाउने, भारतले पन्छाउने !
संवैधानिक कि बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्‍नेमै अलमल